Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: lalànam-piainana sy fahaizana miara-monina | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: lalànam-piainana sy fahaizana miara-monina
Omaly nifaninana, tamin’izany tsy nilaozan’ny fitenenana tafahoatra ary angamba aza nisy fihetsika mitory fifankahalana. Rehefa nivoaka ny valiny izay manambara ny safidin’ny maro hatao ho eken’ny rehetra, raha mangidy vava ny resy ka diboky ny hafaliana ny mpandresy, araky ny toe-tsaina demôkraty voalaza fa ananan’ny tsirairay sy noho ny fitiavan-tanindrazana nitarika ny rehetra hiditra eo amin’ny sehatry ny fifidianana dia mijanona eo ny firafesana na mbola samy hiezaka sy hitolona ho amin’ ny fandroson’ny hevitra izay heveriny hitondra fahombiazana amin’ny fampandrosoana ny firenena aza.
Andeha hekena fa hevitra no nijoroan’ny tsirairay fa tsy tsangan’olona no antony nitolomany. Arak’izany, samy tokony hanontany tena na ny mpandresy na ny resy, samy hikaroka ny hevitra azo hiombonana sy handrindrana fiarahana miasa. Izany akory tsy mitaky fivadihan-kevitra na fiovan-doko araky ny fomba nahazatra voalaza ho famadihana palitao, fa fifanakalozan-kevitra eo amin’ ny olom-pirenena samy milaza azy ho entanin’ny fitiavan-tanindrazana. Mandeha ho azy ny takalon’ny fiaraha-miasa rehefa milamina ny fifanekena, fa sanatria tsy hatao tsena ka anaovana adivarotra ny sandan’ny fiaraha-miasa. Izay fanaovan’ny mpilalao pôlitika ny tolona pôlitika toy ny fomban’ny mpikarama an’ady mialoha ny firotsahana an-tsehatra no mahatonga ny maro an’isa ho leo politika. Mankaloiloy ny mponina ny toetra ratsy mahazatra noho ny fisehony tazana matetika ao anatin’ny sehatra pôlitika.
Ny taham-pahavitrihana teo amin’iny fihodinana iny ampy hanzava an’izany : atsasa-manilan’ ny olona voasotra ao anaty lisitra no nidongy tsy nandatsa-bato. Izany hoe atsasan’ny mponina no nanda ka naneho ny tsy fahavononany handray anjara amin’ny amboaram-peo ifanarahan’ny vahoaka ho famoahana feo iombonana. Mazàna lalànan’ny mpandresy no manjaka mirona tsikelikely any amin’ny fanaovana jadona amin’ny kabary tsy valiana, mahazo bahana ny fanjakazakana, manangasanga ny fitondrana an-kerisetra tsy ferana. Andaniny matetika ny resy sady tsy afa-po no tsy afa-bela, dia tsy mionona amin’ ny fanoherana ara-dalàna, fa tarihin’ny fakam-panahy lasa mivarina any amin’ny fanakorontanana. Na ny mpanjakazaka na ny mpanakorontana samy nandevona ny lokaloka nifamatorana tamin’ny mpifidy omaly nandritra ny fotoan’ny fampielezan-kevitra. Aoka hitondra izay lany, aoka ho mpanohitra izay resy, aoka izay ny adilahy pôlitika manimba rivotra eto amin’ny fiarahamonina.